Ayeeyo 91 sano jirta oo jaamacad dhamaysay - BBC News Somali
Lahaanshaha sawirka Panumas Sanguanwong/BBC Thai
Image caption Kimlan ayaa kamid ah kumanaan qof oo sanadka qalin jebisay
Haweenaydan oo u dhalatay dalka Thailand ayaa jirta 91 sano, waxaynta tiri "Wakhti kaama tegayo si aad u wax u barato". Waxayna dhamaysay heerka koowaad Jaamacadda, kadib 10 sano oo ay dadaal dheer ku bixisay.
Mudo dheer kadib, oo ay aragtay caruurteedii oo dhameeyey jaamacadaha, ayay go'aansatay in ay ka dhabayso hammigeedii, ugu danbayna Arbacadii lasoo dhaafay ayay qalin jebisay.
"Inta badan, waxaan dooni jiray in caruurtaydu Jaamacad helaan. Marka waan dhiiri gelin jiray waana taageeri jiray, marka ay doonayaan in ay jaamacadda ku biiraan."
Image caption Qalin jebintii Kimlan waxaa ka qayb galay qaar kamid ah ehelkeeda
Afar kamid ah shanteeda ciyaala ayaa qaatay heerka labaad ee Jaamacadda 'Masters', mid kamid ahna waxa uu doonayaan in uu Maraykanka ka qaato shahaadada PHD-da.
Mid kamid ah caruurteeda oo ka shaqaysa Isbitaal ayaa iyana markii danbe go'aansatay in ay shaqo u raadsato dibada.
"Kadib markii aan kasoo kabtay geeridii iyo muragadii, waxaan naftayda ku khasbay in ay jaamacadda dhamayso, waxaan rajaynayaa in gabadhaydu ay arrintan ku farxi doonto", ayay tiri haweenaydan oo BBC la hadashay.
Lahaanshaha sawirka Kimlan Jinakul
Image caption 10 sano ayay ku qaadaty Kilman in ay jaamacadda ku dhamayso
"Ma aha wakhti danbe, maskaxdaydu weligeed way soo jeeday wayna firfircoonayd si ay wax u barato," ayay tiri Kilman.
"Adduunkan ma istaagayo. Weligeed waxaa jiraya caqabado ay tahay inaan xallino. Haddii aanu jirin micne, horumarka adduunku waa istaagayaa,"
Daawo: Hooyo Soomaaliyeed oo 60 jir ah oo jaamacad ka qalin jebisay
Markii la waydiiyay sirta ka danbaysa guusheeda, waxay ku jawaabtay waa go'aan iyo hiigsi waxa halkaas i gaarsiiyay.
"Markaan naftayda u sheego inaan hal qayb dhammeeyo, awooda intaan samayn karo ayaan dadaalaa. Waxaan hoosta ka xarriiqaa dhammaan qodobada aan u baahanahay si aan u xasuusto. Waana waxa i saaciday mudadii aan waxbarashada ku dhex jiray.
"Aad baan farxayay markaan guulaysto, waana murugoon jiray hadddii aan dhaco. Sidaas daraadeed waxaan markale samayn jiray imtixaanka si aan u guulaysto". ayay tiri iyada oo qoslaysa.
"U malayn maayo in qofna shaqo i siin doono haddii aanba shaqo raadsado" ayay ku kaftantay.
"Waan sii wadi doonaa inaan xanaanayeeyo caruurta aan ayeeyada u ahay."
Nin derbi jiif ahaan jiray oo noqday taajir maalgashade ah